japanSamachar | जापान जानकारी | जापानमा कोरोनाको खोप लगाउने लगायत बुझ्नैपर्ने कुराहरु
(Japan) 14 th April | 2021 | Wednesday | 3:54:44 PM || (Nepal) 12:39:44 PM
जापानमा कोरोनाको खोप लगाउने लगायत बुझ्नैपर्ने कुराहरु
POSTED ON : Friday, 19 February, 2021 | Views : 1186
फेब्रुवरी १७ तारिखबाट जापानमा कोभिड–१९ विरोधी खोप लगाउन शुरु लगाउन सुरु भईसकेको छ ।
टोकियोमा एक डाक्टरलाई अमेरिकी फर्मा कम्पनी फाइजरको खोप दिएर सो अभियानको थालनी गरिएको हो । टोकियो मेडिकल सेन्टरका निर्देशक काजुहिरो आराकीले बुधवार बिहान ऐतिहासिक खोप लगाए ।
खोप पछाडि रहेको नयाँ प्रविधिप्रति जनमानसमा चिन्ता रहेको भएपनि सरकारले बृहत स्तरको खोप अभियान शुरु गरेको छ । स्थानीय सरकारले विवरणबारे काम निरन्तर गरिरहेकै बेलामा अभियान आरम्भ भएको छ । स्थानीय सरकार पूर्ण रुपमा तयार नहुनु आश्चर्यजनक नरहेको खोप कार्यक्रम शुरु हुने पूर्व सन्ध्यामा कार्यक्रमका प्रमुख तारो कोनोले भने । निश्चित योजना भन्दा लचिलोे योजनाको महत्वमाथि कोनोले जोड दिएका छन् ।
जापानले बेलायत र अमेरिकाको कदम पछ्याउँदै बुधबारदेखि खोप अभियान शुरु गरेको छ । बेलायतमा डिसेम्बर ८ र अमेरिकामा डिसेम्बर १४ मा खोप कार्यक्रम शुरु गरेको थियो । एशिया–प्रशान्त क्षेत्रमा पनि चीन, भारत र इन्डोनेशियाले खोप कार्यक्रम शुरु गरिसकेका छन् । जुलाई २३ मा टोकियो ओलम्पिक शुरु हुनै लाग्दा खोप कार्यक्रमले जनमानसको चिन्ता साम्य गर्ने आशा जापानको छ ।
अहिले जापानको खोप कार्यक्रम अमेरिकी फर्मा कम्पनी फाइजर र जर्मन साझेदार बायोएनटेकले विकास गरेको खोपमा निर्भर छ । यस खोपमा कोरोना भाइरसको डिएनएसम्बन्धी जानकारी प्रयोग गरिएको छ । यो नयाँ प्रविधि हो । खोपलाई आइतबार प्रधानमन्त्री योशिहिदे सुगा नेतृत्वको सरकारले औपचारिक मञ्जुरी दिएको छ ।
जापानले बेलायती फर्मा कम्पनी अस्त्रजेनेका र अमेरिकी फर्मा कम्पनी मोडेर्नाले विकास गरेको खोप पनि प्रयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । तर यी दुबै खोपले अहिलेसम्म आधिकारिक मञ्जुरी भने पाइसकेका छैनन् । कोनोले लक्षित खोप दरबारे भने केही पनि बताएका छैनन् । जनमत सर्वेक्षणहरूले खोपका लागि उच्च समर्थन देखाएकोमा उनले जोड दिएका छन् । खोप सम्भव भएसम्म धेरैले लगाउन भनेर आफू पनि खोप लगाउन कुरिरहेको कोनोले बताए । जापानी खोप अभियानबारे तपाईले जान्नै पर्ने पाँच कुराहरु निम्नानुसार छन्ः
जापानका १२ करोड ६० लाख जनसंख्यालाई खोप लगाउन करीब एक वर्ष लाग्ने अपेक्षा गरिएको छ । पहिलो समूहमा सार्वजनिक अस्पतालमा कार्यरत ४० हजार वा सोही आसपासका फ्रन्ट लाइन स्वास्थ्य कर्मचारीहरू छन् । सरकारले आवधिक रुपमा यी मध्ये २० हजार जनाको स्वास्थ्य जाँचको नतिजा घोषित गर्नेछ । यसमा उनीहरुमा केही साइड इफेक्ट देखिएको कि देखिएन भन्ने पनि रहनेछ । त्यसपछि बाँकी कार्यक्रम देशका करीब ४० लाख स्वास्थ्यकर्मीमा सर्नेछ ।
दोस्रो समूहमा भने ६५ वर्ष वा सो भन्दा बढी उमेरका ३ करोड ६० लाख मानिसहरु छन् । यिनीहरुलाई अप्रिलमा खोप दिइनेछ । त्यसपछि ८० लाख दीर्घ रोगी, नर्सिङ केयर होममा काम गर्ने २० लाख अनि ६० देखि ६४ उमेर समूहका ७५ लाखलाई खोप लगाइनेछ । कार्यक्रमको शुरुआती चरणमा कूल ५ करोड ७७ लाखलाई खोप लगाइनेछ ।
सरकारले त्यसपछिको खोप तालिकाको थप विवरण सार्वजनिक गरेको छैन । आफूले वृद्ध वयस्कहरुलाई खोप लगाउन कसरी शुरु गर्ने भन्नेबारे शुरुमा ध्यान दिएको कोनोको भनाइ छ । त्यसपछि के हुन्छ भन्नेबारे चाँहि केही पनि रणनीति नबनाएको उनले बताए । तीन हप्ताको अन्तरालमा हरेक व्यक्तिलाई खोपको दुई डोज दिइनेछ ।
के यो अनिवार्य हो ?
अँह, होइन । १६ वर्ष वा सो भन्दा बढी उमेरका मानिसहरुले खोप लिने प्रयास गर्नु पर्नेछ । यो अन्य क्षयरोग वा डिप्थेरिया विरुद्ध दिइने खोप जस्तै छ । जापानमा विफर र टाइफाइड जस्ता संक्रामक रोग नियन्त्रण गर्न विश्वयुद्धपछि बृहत खोप अभियान चलाइएको थियो । यी रोगहरु त्यतिबेला विदेशबाट आएका सेनाहरुसँगै भित्रिएको थियो ।
मौलिक इन्फ्लुएन्जा ऐन अन्तर्गत खोप अनिवार्य छ । खोपका कारण उत्पन्न दूघर्टना र कानूनी झमेलाका कारण सन् १९९४ मा सो ऐनमा संसोधन गरियो । त्यसपछि भने मानिसहरुलाई प्रयास गर्न बाध्य बनाइएको छ । आजभोली जापानमा खोप मुख्यतः शिशु र साना बालबालिका तथा ६५ वर्ष वा सो भन्दा बढी उमेरका वृद्धका लागि छ ।
खोपको वितरण कसरी हुन्छ ?
लामो समयदेखि जापानमा व्यापक खोप अभियान कार्यान्वयन गरिएको छैन । यस खोप अभियानमा ठूलै लजिस्टिक चुनौती आउने अपेक्षा गरिएको छ । अस्पतालहरुमा डाक्टर र नर्सहरुले दैनिक सञ्चालनमा अवरोध हुन नदिइ आ–आफ्नो पालो कुरेर खोप लिनु पर्नेछ । फाइजरको खोपले ज्वरो आउने थकान महसुस हुने जस्ता केही साइड इफेक्ट निम्त्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
डीएचएल, यामातो र सेइनो जस्ता परिवहन कम्पनीहरुले ठूला अस्पतालहरुमा खोप पुर्याउनेछन् । आफ्नो क्षेत्रमा बसोबास गर्ने बासिन्दालाई खोप लगाउन कार्यक्रमको दायित्व स्थानीय अधिकारीहरुको हुनेछ । केही स्थानीय सरकारले विद्यालयको व्यायामशाला जस्ता ठूला सार्वजनिक स्थलहरुमा खोप लगाउने योजना बनाइरहेका छन् । केहीले भने नजिकमा रहेको क्लिनिकमा बोलाउने तयारी गरिरहेका छन् । केहीले भने यसका लागि ठूला शपिङ मल रोज्न लागेका छन् । अनि केहीले भने कार्यस्थलमा नै खोप लगाउन अनुमति पनि दिन लागेका छन् ।
यस प्रयासमा सरकार र अन्य पक्षहरुले कसरी समन्वय गर्छन् ?
यसको कार्यान्वयनको पाटो अलि जटिल छ । चतुर खालको व्यवस्थापन आवश्यक छ । देशभर डेलिभरी र प्रगतिको व्यवस्थापन भी–सिस प्रणालीमार्फत गरिनेछ । यो प्रणालीको विकास जापानको स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको हो । मेडिकल कर्मचारीहरुलाई भी–सिस प्रणालीले अधिकारी, खोप निर्माता र सुख्खा आइस आपूर्तिकर्ता लगायत अन्य पक्षहरुसँग स्वास्थ्य संस्था सम्बन्धी जानकारी उपलब्ध गराउन मद्दत गर्नेछ । क–कसले खोप लगाएको छ भन्ने रेकर्ड व्यवस्थापनका लागि जापानले अर्को राष्ट्रिय प्रणाली बनाउँदैछ ।
एशियाका अन्य क्षेत्रको अवस्था के छ ?
खोप अभियान शुरु गर्नेमा चीन, भारत र इन्डोनेशिया अगाडि छन् । चीनले डिसेम्बरको मध्यमा निश्चित उमेर समूहमा खोप कार्यक्रम शुरु गरेको थियो । भारतले पनि मध्य जनवरीदेखि अभियान चलाइरहेको छ । सिंगापुरले पनि डिसेम्बरको अन्त्यदेखि स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई खोप लगाउन शुरु गर्यो । आफ्नो कूल १४ लाख ८० हजार स्वास्थ्यकर्मी मध्ये ७० प्रतिशतलाई खोप लगाइसकेको सोमबार इन्डोनेशियाले बताएको छ ।
अन्य कयौं देशहरुले सर्वसाधारणलाई खोप लगाउने अभियान शुरु गरेकै छैनन् । फाइजर र बायोएनटेकबाट खोपको पहिलो आपूर्ति पाएको यसै हप्ता अष्ट्रेलियाले बताएको थियो । मलेशियाले फाइजर र बायोएनटेकबाट आगामी आइतबार आपूर्ति पाउने अपेक्षा गरिएको छ । त्यहाँ खोप कार्यक्रम भने फेब्रुअरी २६ देखि शुरु हुदैछ । दक्षिण कोरियाले पनि फेब्रुअरी २६ देखि नै खोप कार्यक्रम शुरु गर्न लागेको सञ्चार माध्यमहरुले बताएका छन् ।